Kutheni iRory ifuna ukuGqibela ngeLogan | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Kutheni uRory efuna ukuPhela ngeLogan
Kutheni uRory efuna ukuPhela ngeLogan
ULogan noRory 5evaIWarner Bros. TV
iipilisi zokutya ezingabizi kakhulu ezisebenzayo
Ewe Ewe. Ndiyazi, uAmy Sherman-Palladino uthi thina jolisa kakhulu kumakhwenkwe kaRory (#TeamRory #feminism njlnjl).
Yinto yesenzo sokukhanyela okuhle ukwenza ngathi umboniso awuzange ucandwe yiminqweno eyahlukeneyo yothando. Umlingiswa kaRory wayenqabile-iingcinga zakhe eziphambili (cinga: ukukopela noDean, ukulandela uJess ukuya eNew York, ukweba isikhephe ngeLogan) bekuhlala kuphazanyiswa yinkwenkwe ebomini bakhe.
Ndiya kuhamba ndide ndiphikise ukuba ubude bexesha lokubonisa umboniso beza nobumnandi bokukhetha amaqela. Nangemva kokuba umboniso uphelile, abalandeli banokuphikisana ngobuhle beQela Logan okanye iQela uJess (uthixo angavumeli iQela uDean) ngoburharha obunyanisekileyo bomdlali wezemidlalo okanye umntu ozihlelele kwindlu yeHogwarts.
Kwaye ke, ukuhlonipha isiko elenziweyo Amantombazana aseGilmore kumnandi kwasekuqaleni, ndiza kunika elam ityala, ngenxa yobungqina obutsha beziqendu ezine zokuVusa, ukuba iQela Logan kuphela kwendlela yokuhamba.
Ndihlala ndingowesikolo sokucinga ukuba uRory woyikeka kancinci, kwaye iMvuselelo Rory iyenza icace nangakumbi.
Ukuvuselela uRory kubi kakhulu kunakuqala kuRory. Ewe, ibonisa ukuba ilahlekile kumjelo wayo , kodwa ikwabonisa ukuba kutheni yena noLogan bedibene ngokugqibeleleyo. Thatha uMboniso A: Paul. UPaul uyisoka elitsha elibuhlungu likaMvuselelo Rory-ngazo zonke iiakhawunti inkwenkwe entle, entle kakhulu uRory une-ben kubonakala ukuba uthandana iminyaka emibini. UPaul uyacinga kwaye unesisa. Ubonisa isidlo sangokuhlwa ngeentyatyambo kunye nesitshixo se-antique awayeze naso kuba wayeyazi eyakhe intombi kanina yomfana ndinganomdla kuyo. Yimeko yokuziphatha kuka-A + kwisoka. Kwaye uRory uphendula ngokumlibala rhoqo nokungamhoyi. Oku akusiyo ukunyanisela-ukuba i-gag (uRory ukhohlwa isithandwa sakhe uPaul) yindima kaPaul kuphela kwimiboniso. Wonke umntu uyamlibala uPaul, ha ha ha. Njengokuba ayilulo uhlobo lwento eyoyikekayo ukuyenza kwinkwenkwe entle. Rory rhoqo ngekhe amphathe uMarty ngoluhlobo.
Kunqabile ukuba kuthiwe kukhangelwe ukuba uRory ukopela noPawulos. Indlela kaRory yokwenza izinto ngokuthembeka ibhalwe kuthotho lwantlandlolo: waphulukana nobuntombi bakhe kuDean otshatileyo. Kodwa apho bekudlalwe kakhulu-okanye-kancinane njengempazamo yexesha elinye, imvuselelo isibonisa uRory engaphendukanga ekopela isoka lakhe ngezitalato ezingahleliwe zeWookies kwaye, ewe, uLogan, naye okwenzekayo ukuba angazibandakanyi kubonakala ngathi ukhathalele.
Ewe, uLogan ubandakanyeke kwintombazana ethile ehlwempuzekileyo egama linguOdette ebonakala ilunge ngokugqibeleleyo, kwaye nokuba ebengekho, ulungile ngokwaneleyo ukuba uLogan usazimisele ukumtshata. Okwangoku, uRory uyakwazi oku kwaye ugcina ukubhabha ngaphandle eyokwabelana ngebhedi nendoda ethathiweyo, ungaze umcele ukuba aqhawule ukuzibandakanya kwakhe okanye azibuze ngokuvakalayo ukuba wenza into embi (ewe, kunjalo).
Emva kobusuku bokuziphatha kakubi, uRory noLogan ekugqibeleni bayaphula ngokumanga ngothando, ngokungathi ukubandakanyeka kwakhe kuyisithintelo esibuhlungu ngaphandle kolawulo lwabo kwaye ayisiyonyani yokwenyani enesityebi, enelungelo, eneminyaka engama-32 ubudala ngo-2016 yenziwe.
URory kunye noLogan babonakala ngathi abazisoli malunga nokukopela-kuphela malunga nokuba u-Odette ubagcina behlukene. Andithethi ukuba ndivakale ngathi kudala, okanye ngathi ndisisidenge, kuba nam andiyiyo, kodwa ndiyacinga Amantombazana aseGilmore uyayilibala into yokuba umntu okopela umntu abaza kutshata naye mubi kwaye ayisiyongxaki nje yokuba inqanawa ingenakudada.
KODWA-nantsi indawo ebalulekileyo-ayinamsebenzi ukuba ndicinga ntoni. Kubalulekile ukuba uRory noLogan bacinge ntoni kwaye bobabini bacinga into enye: ukuba le yinto eqhelekileyo kwaye ibuhlungu kwaye ilungile kuba bayathandana. Zombini zisoyikeka ngendlela efanayo-ukukholelwa ukuba intelekelelo yabo ibanika ilungelo lokwenza nantoni na abayifunayo nokuba ingabenzakalisa njani abanye.
Ke, uRory kunye noLogan bobabini bayakhohlisa. Kodwa loo nto ibonisa nje ikhonkco labo elinzulu, kwaye isizathu sokuba uRory agqibe kuphela ukonwaba ukuba ukunye noLogan.
Into kaRory kukuba uyathandeka, wonke umntu ongatshatanga uyamthanda. UTristan, uPuffs eChilton, uMarty, ubomi kunye neqela lokufa, i-DAR-wonke umntu uRory awakhe wanxibelelana naye wayenomdla kwaye wachukunyiswa yinto yokuba efunda incwadi okanye into. Ilungelo lakhe lokuba yi-MO ngalo lonke ixesha, phantsi komhlaba wentombazana entle ejongene nomntwana othanda ukufunda nokusela ikofu kunye nomama wakhe omnandi.
Siyazi ukuba ukrelekrele kuba wangena eChilton naseYale, kodwa xa eneminyaka engama-32, uyabopha wonke umntu omngqongileyo, uphumle iziqwenga ezimbalwa ezizimeleyo kwaye ucinga ukuba zanele umsebenzi. Kwaye kwinto esiyibonileyo, uRory kakhulu, kubi kakhulu ukuba ngumbhali ozimeleyo. Kwiminyaka eli-10 eyadlulayo wayegubungela umongameli wexesha elizayo u-Barack Obama kwaye ngoku ucela ukuba abhale amaqhekeza e-GQ (ngaba ugqiba ukubhala elo bali?) URory ubonakalisa udliwanondlebe ngomsebenzi engakulungelanga kwaphela kuba ucinga ukuba lo msebenzi uphantsi kwakhe , Kwaye emva koko uphosa ulwaziso xa engafumani sithuba.
Ungumfazi oneminyaka engama-32 ubudala otshayisa nomhlobo wakhe wesikolo esiphakamileyo uLane. Umgaqo wobomi, uRory. Unentsapho. Akakwazi ukuqhubeka nokujongana ne-bullshit yakho ngalo lonke ixesha kwaye ukupheka i-pancake kusasa. Kwaye xa uRory engahlali kwaLane, okanye endlwini kanina, okanye kuye ubandakanyekile indlu yesoka, ukwindlu kamakhulu wakhe, indawo ethe cwaka anokuya kuyo ukubhala incwadi yakhe. (Owu, ukuba sonke sinezindlu ezinkulu zokuhlala kwirente simahla, kunye nezicaka zokupheka ukutya kunye nokusithengela ngelixa sibhala iincwadi zethu.)
I-Rory iyangena kunye nootatomkhulu noomnye omnye utolo oluqaqambileyo lwe-neon olukhomba kwi-Logan. Ngokungafaniyo nomama wakhe owavukela ukukhuliswa kwakhe ngobutyebi kwaye wazinqumlela ekusebenzeni njengentombazana ehotele kwaye wakhulisa intombi njengomzali ongatshatanga, uRory akazange azikhuphe kwilungelo lakhe. Wayenomkhulu nootatomkhulu bakhe bahlawula indlela yakhe ngokusebenzisa isikolo esiphakamileyo sabucala kunye nekholeji yangasese (okanye, baya kuba nayo ukuba uRory wayengenayo enye Isihlobo esisityebi sokuqinisekisa ukuba aphumelele ngaphandle kwetyala), kwaye xa uRory wayelahlekile kwaye ethatha ikhefu esikolweni, waba no-Emily Gilmore ukuba enze igumbi leendwendwe kwaye ammemele kwi-DAR.
Ukusuka eChilton ukuya kuYale, sibona uRory ethembele kwisazisi sakhe semali sakudala. Akazange aye kwisikolo esincinci sobugcisa obunenkululeko, okanye, njengoJess, azame ukuyenza yedwa eNew York, okanye eCalifornia. Sisoloko simbona emi kamnandi kwaye ezinekratshi phakathi kwabantu abakwi-East Coast elite. Wayehlambalaza njengoEmily xa intsapho kaLogan yayicinga ukuba nguGilmore ayizange imenzele ngokwaneleyo. URory uhlala ecinga ukuba ulungile ngokwaneleyo. Kwaye njengomsebenzi kwiwebhusayithi awayecinga ukuba iphantsi kwakhe, okanye amadoda atshatileyo ahleli nawo, uyadada ngokucinga ukuba ufanelwe yiyo yonke into.
Ngokuchanekileyo njengenye intle, inkwenkwe e-East Coast eyonakeleyo ngomnatha wokhuseleko lobutyebi.
URory kunye noLogan bafanelana. Kwaye oku akuthethi nokuba ngabantu abangalunganga, kodwa bobabini lilize kwaye banelungelo ngendlela efanayo. Zombini zilumkile kwaye zifundeka kakuhle, kwaye ziyakwazi ukurhweba ngeebarb zeTarantino. I-Logan iyathandana kwaye iyayithanda iRory, kwaye uRory uyayifuna loo nto. Ufuna ukuqinisekiswa komntu osisityebi kwaye oxhunyiwe kwaye onamandla kunye nokuzithemba kwaye mhle, kwaye kulungile. Kwaye uLogan ufuna i-Ace ekhutheleyo ukuze ibe nempembelelo entle kuye. Ukuhambelana nenqanaba loqoqosho lwentlalo yeyona nto inegalelo ekubeni ubudlelwane buya kusebenza na. URory noLogan bavela kwihlabathi elinye. Babelana ngeendlela ezifanayo. Ziyinto enye.
Kwaye kuthwala ukukhumbula ukuba uLogan wayengeyonto imbi yesoka. Wayexhasa ngokumangalisayo, umphulaphuli obalaseleyo, kwaye xa wayephazamisile, wakhupha zonke iindawo zokumisa ukubonisa uRory ukuba umkhathalele kangakanani. Ezona mpazamo zakhe zazingutata wakhe omdaka (onokuba enyanisile malunga noRory engakwazi ukuyenza njengentatheli), ayisiyiyo mpazamo kaLogan, kunye nobunzima bakhe bokuba neqabane elinye, elingelilo isuti eyomeleleyo kaRory ( bona: UPawulos).
Kodwa kuthekani ngoJess? Mhlawumbi ubuza malunga ngoku. UJess uyamangalisa, kwaye unothando, kwaye uqinisekile ukuba wayeyintsini xa wayekwishumi elivisayo kodwa waye wagqitha koko! UJess ngowona ulungileyo! Nditsho, ewe! Unyanisile. UJess uyahlekisa kwaye upholile kwaye ulumkile. Kwaye kufanelekile ukuba angcono kunoRory, intombazana leyo, njengoko watsho uMaris Kreizman uphononongo lwayo lweenkwenkwezi , ayithathi nencwadi enye kwimvuselelo yonke yonyaka. UJess ufanelwe yintombazana eyoyikekayo eBrooklyn eqale eyakhe i-zine kwaye esebenza ubusuku ukuze azixhase kwaye echitha iintsuku zakhe ebhala iibhlog malunga no-Elena Ferrante. Ngokuqinisekileyo, wayethandana noPrincess Rory xa wayekwishumi elivisayo kuba kaloku wayenjalo. Kodwa njengomntu omdala, kufuneka ndinethemba lokuba uza kufumana umntu ongcono.
URory ufana neBelle ngaphakathi Omhle kunye nesilwanyana : Eyona ntombazana ishushu edolophini echaza uphawu lokuba iyamthanda umzali wayo ongatshatanga kwaye iyakuthanda nokufunda. Uthi uphupha ukubona ububanzi bukhulu kwindawo ethile ngaphandle kwedolophu yakhe encinci yephondo, kodwa uya kuphelela onwabile xa etshata nendoda esisityebi ehlala phezulu kwendlela.
I-Generic Thriller 'Ukubaleka noMtyholi' Ukuchitha ixesha kunye neTalente kaNicolas Cage
'Umfazi Olungileyo' Phinda u-7 × 7: iT-Port okanye hayi iT-Port
Umqhubi wenqwelomoya kaTrump unokuba yi-FAA ephezulu ye-Boss
Isiqithi skull skull brie larson
ezona zixhobo zokudibanisa kwiarthritis
Amaxabiso amatikiti ehlabathi e-disney
Ngaba iklabhu yokucheba iidola ngokusemthethweni
ilali yelali elingasemva kwiphepha elitsha york